Posted on 09 / 12 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora garari. Izvo zvine 50 Comments.
Izvo zvakagadziriswa zvemuumbi yacho zvine ma-isomeri maviri: S uye R. Vose vane simba rakanaka pane psyche sevanopesana nemhepo. Zvisinei, R-nheomeri inowedzera, sezvo, kusiyana neS-fomu, inowedzera hunoita mabasa akafanana nekuyeuka uye kutaura. Inobatsira neural connections muuropi, inosimudzira kushandiswa kweRNA, inopa ropa rakanakisisa rinopa. Panewo imwe yechitatu ye phenylpyrazetam (phenotropil) - SR. Icho chisanganiswa chinopararira chemasomisi maviri, anosanganisira zvinhu zvavo. Panguva ino, yakachena R-isomeri yemishonga haisviki kutengeswa. Saka, chenjerera kana iwe wakatenga phenylpyricetam inenge iine simba rakaoma. Kana muyero wacho wakakwana, zvino zvichida iyi ndiyo S-fomu yemakiromiti. Zvigadzirwa zvedu zvine SR-fomu, uye ine zvese zvinobatsira zvechirwere.
Zvichida, phenylpyracetam inogona kunzi imwe yezvinonyanya kushandiswa neotropic zvinodhaka zvezuva redu. Yakasikwa zvakanyatsokonzerwa nehutano hwakasimba pane zvirwere zvakakomba zvinosanganiswa nekuyeuka kwepfungwa, kutaura, kana kuwirirana kwekufamba. Phenylpyracetam yakawanda nguva yakawanda, inozivikanwa kubva panguva yeSoviet Union yezvinhu zvinonzi "pyracetam." Kuwedzerwa kweboka re phenyl kwakabatsira pakuvandudzika mune pharmacokinetics yemishonga (somuenzaniso, kunyanya kudarika kupinda mukati ropa-brain brain), rinoita kuti rive rakasimba uye rinokurumidza.
Phenylpiracetam powder - Zvikamu zvinokonzera uye zvinopesana
Tinotenda kuti hazvinei pasinei nokuti iwe unoudzwa sei kuti "mishonga yakachengeteka zvakakwana," hatitauri kushandiswa kwayo kwemasvondo anopfuura 3, iyo inokutakurei nokuda kwevadzidzisi vemhepo vanoshanda zvakakwirira. Ichokwadi, mune zvatinofunga, zvakanakisisa kushandisa phenotropic episodically, kana zvidzidzo zvemavhiki e2-3 uye kuritora se "Turbo Mode".
Zvave zvichinyatsogadziriswa kuti uremu hwomunhu hunoita basa rinokosha kana iwe uri pasi pe 70 kg: tablet ye 1 (100 mg) mangwanani oga oga, kana pasina zvikanganiso, wobva wawedzera rimwezve, kana imwechete, kana mumaawa 2-3 .
1. Mukati me5-6 maawa. Makore anowedzera, simba, pfungwa. Hakuna humwe humwe hupenyu, iwe uchanzwa wakanamatirwa uye wakagadzirirwa, asi iwe unonzwisisa izvi chete apo zvinoitika zvechirwere zvakapera. Nguva iri pakati pe "kufunga-ku-kuita" inooneka yakaderedzwa, uye panguva ino zvakanaka kuti usaita zvikanganiso. Hurukuro inowedzera kukurumidza, ndinoda kutaura pamusoro pezvose, asi kana pasina humwe hura dzekunzwa, edza kuverenga, kunyora, purogiramu, pakupedzisira. Chimwe chiitiko chinonakidza - Ndinoda kuti munhu wose ataure nekukurumidza kana iwe uchiverenga bhuku nekukurumidza zvokuti unodya mamwe mashoko. Vatambi vanofara zvakare.
2. Mumazuva 10-14. Kuyeuka uye wit zviri nani zvishoma nezvishoma, sezvinoitika kune zvinowanzoitwa nootropics. Full FullHD dreams are removed, so you can practice "dreamed dreams".
Mushure mokunge 20-60 maminitsi, zvichienderana nematetabolism (metabolism). Nootropic effect - mushure memazuva 10-14.
Mhinduro ye50 Comments
Icho chinyorwa chakanaka. Ndakasvika pakuziva nezvezvinhu zvine chokuita nekurema kurasikirwa poda paIndaneti.
Handikwanisi kutenda zvose zvichishandurwa muviri wako uchapfuura nokutora Carphedon powder. "Kutungamirirwa kurota" kunonzwika zvinonakidza kubva pane zvose zvinogadziriswa neNootropics. Ndinonzwa sokuti iwe unofanirwa kutora zvinowedzera izvi kuti unzwisise zvakanakira zvose.
Inzwi sezvinodhaka zvine simba mukusimudzira unhu hwepfungwa nehuviri hwehupenyu hwezuva nezuva. Ndinofarira kuti haufaniri kunge uchivimba nePhenylpiracetam nekusingaperi uye kuti migumisiro uye madhesi zvakanyatsorondedzerwa.
Ndiri mutsva kune nootropics, uye ino inobatsira chaizvo. Shamwari dzangu dzinoramba dzichitaura pamusoro pavo, uye ndinoda kuona uye ndinozviedza ini ndoga izvo zvinonzi hype zvose.
Hungu, tinogona kukukurudzira kuti tishandise zvakanakisa kushandisa chirwere chemishonga J147.
mwanasikana wamambo09 / 21 / 2018 pa 1: 58 am
Nyaya yacho yakanyorwa nenzira yokuti kunyange vadzidzi pamusoro pemishonga inonzwisisika inogona kunzwisiswa nyore nyore. Ndichavakurudzira kune avo vane urema hwepfungwa.
Chiedza chinovhenekera vanhu vanotenda muNootropics. Asi haifaniri kuendeswa pasina, ndinotenda kubvunzurudza kunofanira kurongwa.
Ndakatarisa kusingagumi uye kuva neotropics (yakadai seJ147) mumusika nhasi haisi kutendwa. Zvisinei, mishonga yose inobatsira uye iyo ndiyo imwe pfungwa inokosha inofanira kufungisisa isati yatenga kutenga.
Captain U09 / 20 / 2018 pa 10: 23 pm
Izvi zvakachengeteka here kwete vatambi? Chii chandinoda kuchengetedza kana ndichida kuedza iyi Phenylpiracetam? Pamusoro pekambani haigoni kuzvicheka.
Mach09 / 20 / 2018 pa 9: 34 pm
Chii chiri pamusoro pemazita aya kunyange zvakadaro? Hungu, kana iri pabazi iwe unogona kukwanisa kuva sesainzi. Zvisinei, heino chinhu chine chokuita neNootropics, Kana izvi zvichibva pavharifi kwete munhu wose achazviziva.
Zvinoshamisa zvose zvivako zveNootropics uye kukurudzira kwese kwomuviri. Ndinoshamisika kana kune dzimwe mishonga dzakanaka pamusika asi nemamwe maitiro anobva pakarepo. Tinoonga nekugovana.
Ndakaona kuti Phenylpiracetam yakabva kuRussia inonakidza zvikuru. Vanachiremba vanofanira kunyatsokuraira varwere pamusoro pemigumisiro yakareba kwenguva yakareba uye maitiro akachengeteka. Ndinotenda nekugovana!
Iyi inzvimbo yakanyatsogadziriswa yemishonga yakanaka. Ndine chokwadi kuti anenge munhu wese anoverenga izvi achange aida kushandisa madhiragi aya.
Nootropics isiri mishonga yakawanda kune vanhu vakawanda ndinotenda nokuti ndinongotumira izvi kushamwaridzana neshamwari dzangu uye zvitsva kwavari kunyange vachifunga kubvunza chiremba pamusoro payo.
Ndaifunga kuti nootropics yaingova yekuwedzera kukurangarira? Ndakanga ndisingazivi kuti vane zvinetso pamasabolism ako zvakare. Kufarira.
Haana kutenda chaizvo zvirevo pamusoro peNootropics kusvikira chinyorwa ichi. Ndinofunga kuti vane zvimwe zvakakodzera kwavari, ndicho chikonzero ini ndiri kufunga zvino nezvekuedza nootropics.
Hanzvadzi yangu inowanzozvitenga nootropics (yakadai seJ147) kubva kune imwe yezvinyorwa zvinozivikanwa zvikuru zvehutano pano. Ini ndichafanirwa kutaurira mutemo we 3-vhiki wakataurwa pano apo iye akaatora vasina ruzivo rwehutano!
kufara09 / 20 / 2018 pa 2: 58 am
Kurasika kurasikirwa hakusi izvo zvatinofanira kuseka pamwe neni ndinofunga kuti nguva dzose zvakanaka kuti tirambe tichikurudzira nekuvandudza mauropi europi kuti tibudirire.
Zvichava zvakanaka kuti nguva dzose iwedzere kugadzirisa pfungwa dzevanhu uye izvi zvinodhaka zvinodhaka (J147) zvichabatsira mumwe kuzviita. Zvakanaka kuti pane pane pane doping urongwa.
Ichi chichava chirwere chisingagoni kutorwa nemaitiro. Ichi hachisi chekudya chinyorwa chinotaura zvakanyatsonaka nezvekutora Phenylpiracetam. Icho chinhu chakanaka. Kutendeseka nguva dzose chinhu chakanaka kuona.
Iko kunondiyeuchidza nezve Limitless bhizinesi reBrad Cooper iro rine chirwere chinokanganisa zvakafanana saishandisi yemishonga Phenylpiracetam; Modafinil; Armodafinil; Noopept; Sunifiram; Bromantane. Ndinovimba kuti izvi hazvibvumirwi kushungurudzwa zvakadaro.
Ruzivo rukuru kune avo vanoda chaizvo kuwedzera ruzivo rwavo pamusoro peNootropics (yakadai seJ147) .it ichava yakakosha kuuropi.
Mary09 / 19 / 2018 pa 7: 15 pm
Zvishandiso zvemishonga (zvakadai saModafinil; Noopept) uyo asingadi kuva mumwe chete. Asi ndiri kufunga zvakananga.Kana izvi zvangoita izvi zvisingatauri nenyanzvi. Ndinovimba kuti inofanira kutorwa nemurairo wechiremba.
Landen Burrows09 / 19 / 2018 pa 4: 59 pm
Phenylpiracetam inonzwika seyo inobatsira masimba ekuporesa mupfungwa uye mumuviri. IJ147 powder inoitawo kuti inobatsira zvikuru pamagariro ako epfungwa pasina kukubvumira kurasikirwa kwako. Ndinotenda nekugovana!
Inonzwika semishonga inobatsira ine tsanangudzo dzakanyatsotsanangurwa dzemigumisiro yavo yekushandisa Phenylpiracetam. Ndinotenda nekugovana!
Ndinokoshesa kuti zvakakwana sei nyaya ino inotaura nezvechirwere chemishonga (Nootropics). Ini zvachose ndakatsva kwariri, saka ndiri kutsvaga mamwe magwaro pamusoro payo. Uyu unobatsira zvechokwadi!
Handisi kunyanya kufarira nezveNootropics, asi ndinofunga kubvunza chiremba pamusoro pangu uye kana muviri wangu unogona kugamuchira zvakajeka mushonga wePhenylpiracetam. Izvi zvose zvitsva kwandiri nokuda kweMishonga inodhaka, saka ndiri kunyatsochera uye ndichinzwisisa ichi chitsva chemishonga.
Nootropics (Smart Drugs) ndiyo yakanakisisa. Kwete chete ivo vanobatsira kusimbisa uropi hunoita basa, ivo vanobatsirawo nekurasikirwa nekurema. Ndanga ndichitora Modafinil kwemakore 5 ikozvino uye zvipo zviri pachena.
Phenylpiracetam yakandibatsira kuti ndirasike muviri. Asi ndezvechokwadi, iwe unotofanira kunyatsozvitora uye zvakakodzera. Kana zvisina kudaro iwe hauzofariri zvayo.
Vaya vane kurasikirwa mupfungwa inofanirwa kuedza kutenga Phenylpiracetam kubva sekukurudzira kunobatsira kukurudzira chiyeuchidzo chekuita. Ichava yakanaka kune vakwegura ndinotenda.
Ndinotarisira kuti vashandi vePhenylpiracetam (Carphedon) mupfu vachayeuka kutora maonero ekurudzirwa kunyoresa kushandiswa kwaro. Ndinotenda kuenderera mberi nehana yakarurama ichaunza huwandu hunoita.
Zvose Nootropics (Smart Drugs) inobatsira pakukanganisa kurasika mupfungwa.
Hongu, Phenylpiracetam inozivikanwa chaizvo uye inotyisa kutengesa mumusika ikozvino.
Hungu, ini ndinogona kukukurudzira iwe:
Izvo zvose zvatinogona kutengesa zvigadzirwa! ^ _ ^
Kunyanya, ndinowana ruzivo rwakanyanya ruzivo pano pamusoro pemishonga yePhenylpiracetam. Ndinenge ndisingawanzoshandisa marudzi ose emishonga pamusika, ndinoshandisa kushandisa tsika dzepanyama / zvakasikwa kunyange zvazvo kurapwa kunoratidzika kunonoka.
Chinhu chakanaka mutevedzeri akatora nguva yekuisa mitsara inoreva kuti ini ndinoreva Phenylpiracetam dosage uye zvose zvandinoda sezvo ndisingazivi chinhu pamusoro peizvi. Zvisinei, kutonga kubva kunezvipfungwa izvi ini ndinoda chiremba chiremba ndisati ndachiwana.
Kubva pane zvinorondedzerwa, handigoni kuona asi kuti Phenylpiracetam (Phenotropil) chirwere che racetam chinobva kuPiracetam umo kunongogadziriswa chete kuwedzerwa kwe phenyl boka kusvika pakarongwa.
Iyo Phenylpiracetam capsules uye powdhari inoita seine simba guru pamusana pemakemikari uye nekuziva. Ndinofarira kuti vanokanda zvishoma uye vanowedzera kufara uye muviri kuratidzira zvose panguva imwe chete.
Zvakanaka izvi Nootropics (Phenylpiracetam) zvine simba rakadaro mupfungwa dzako uye nekushanda kwomuviri. Ndinofarira kuti pane maitiro ekutungamirirwa kune muviri umwe neumwe uye zvinotsanangurwa zvakajeka zvekuti vanoshanda sei. Ndinotenda nekugovana!
Icho chakanaka chaizvo. Ndakawana zvinhu zvakakura pamusoro pekureruka kwekuperesa poda mudhorosi mberi asi zvinoita sekusina kukwana.
Ini handinyanyi kuvimba nemaDrugs Drugs zvakanyanya sezvandisingatori kutora. Ndinofunga kuti kuedza Smart Drugs hakuiti kuti upenyu hwevanhu huve nani. Handisi kupesana nekudzidza uku, ndangoda kuita kuti vanhu vazive kuti kana vachida kuva noutano hwakanaka vanogona kuitanga iyo nzira chaiyo.
Ndakatambudzika. Asi ini zvechokwadi ndinogona kushandisa madhiragi aya, ndichiziva kuti inogona kuita sei pakukurudzira kusimba, kunyanya nemhando yebasa rangu nekufungisisa zera rangu, zviri kuoma zvakanyanya kuchengetedza.Saka izvi zvinorema kurasikirwa powders zvichava pfungwa yakanaka kwandiri uye zvichida ndichazotenga sibutramine powder gare gare.
Saka izvi ndizvo zvinonzi - Nootropics. Vanhu "vakangwara" vari kuzviwedzera ivo pachavo neototropics kuti vaende mberi.
Pane here Nootropics (Smart Drugs) iyo inobatsira neChina chinetso?
akaropafadzwa09 / 18 / 2018 pa 8: 30 am
Ndinofunga kuti vanhu vari kutarisana nemhirizhonga yakaoma vanofanira kuedza Phenylpiracetam kubva kune ruzivo rwekudzokorora uku Iveleve ichave yakabatsira zvikuru uye ini ndichati ndiedze kuti iite basa romuviri.
rudo09 / 18 / 2018 pa 8: 24 am
Izvi zvitsva kwandiri, ndakangodzidza nezveNootropics (Smart Drugs). Ndichanyora zvakawanda pamusoro pePhenylpiracetam powder Ndinongoda zvakagadziriswa pane muviri.Iyo inotyisa kuti iwane mhizha apo mishonga inopera.
Izvi zvose zvakanaka kwandiri. Handina kumbobvira ndava nemhando ipi neipi yehupenyu uye kuti ndiri sei semunhu ane chokuita nekudzvinyirira, nezvimwewo (Ndinonyatsoziva kuti handisi kugara pane zvinhu zvakawanda zvakashata zvakanyanya uye ndinoita chokwadi kuti ndinodya kudya kwakanaka kudya uye kuva nemararamiro ane hutano hwakanaka), uye hongu, kushandisa zvinodhaka zvinotyisa ini (kunze kwekuti ndiri kurwara uye ndinofanira kutora mishonga yacho). Ndinongoda kuziva kuti zvakachengeteka sei nootropics zvisati zvichitsvaga mukati maro kana zvichitowedzera kana ini ndingafanirwa. Zvisinei, kutarisa kuburikidza nenyaya ino kunoita kuti iite seisina kunaka.
Zvose Nootropics hazvirevi zvakanaka kune utano hwako hwose. Mamwe emishonga ayo anyoresa mu doping rwandu uye kwete zvakanaka kumitambo yemunhu.
Ini ndichada kuedza Phenylpiracetam powder nokuda kwekunzwisisa nekugadzirisa mafungiro. Ndinowedzera kushamisika kwemazuva uye dzimwe nguva dzimwe nguva zvinokanganisa kufunga kwangu. Ndine chokwadi kuti zvichave zvichibatsira chaizvo.
Guru Guru Chiremba, zvichange zviri nyore kwazvo iyezvino kuziva zvose zvese nezvezvinhu zvakanakisisa zveNootropics zvino mumusika. Zvakanakisisa kudzidza chimwe nechimwe chezvinhu zvinodhaka kuti uwane zvakanakisisa pamuviri wega wega.